FAQ - Somali | frida Beratung
Su’aalaha ku saabsan magangalyada Su’aalaha ku saabsan mideynta qoyska Su’aalaha guud Sharciga Qalaad
Su’aalaha ku saabsan magangalyada
Waxaan ka helay go’aan diidmo ah BFA. Maxaan samayn karaa?
Haddii aad ka heshay go’aan diidmo ah BFA oo aadan ku raacsaneyn, waad sameyn kartaa cabasho. Taas awgeed waxaa laguu qoondeeyay xarun talo bixin sharci ah sida: ARGE (Diakonie iyo Volkshilfe) ama Ururka Xuquuqda Aadanaha Austria. Xafiisyadan waxaa waajib ku ah inay kuu qoraan cabashadaada haddii aad rabto. Laakiin sidoo kale waxaad xaq u leedahay inaad aado xafiis kasta oo kale ama aad qabsato qareen. Waxaad sidoo kale noola imaan kartaa ashtakadaada, laakiin fadlan la soco inaan kuu gudbin doono ARGE haddii laguu diray adiga.
Mudo intee le’eg ayaan waqti u haystaa cabashada?
Waxaad haysataa (badanaa) keliya 4 toddobaad oo aad ku soo gudbiso cabasho. Si kastaba ha noqotee, muddadani ma bilaabmayso maalinta aad hesho ogeysiiska, laakiin badanaa xilliga go’aanka la gaaray ayay bilaabmaysaa. Sidaa darteed, haddii aad hesho ogeysiis, waa inaad tagtaa xarunta la-talinta sida ugu dhakhsaha badan. Waxaa ugu fiican inaad sidoo kale haysato baqshadda go’aanka lagu qaatay, markaa way u fududaan doontaa la taliyayaasha inay arkaan inta wakhtiga kama dambaysta ah ee aad haysato.
Haddii aan cabasho sameeyay, weli miyaa lay celin karaa?
Haddii aad sameysay cabasho, waxaad caadi ahaan ku sii wadi kartaa inaad si sharci ah ku joogtid Austria illaa inta go’aan laga gaarayo. Xaaladaha qaarkood ka hor ayaa lagu masaafurin karaa, laakiin tan waxaa si gooni ah loogu sheegaa ogeysiiska. Haddii aadan hubin, fadlan nala soo xiriir.
Waxaan cabasho u qoray Maxkamadda Maamulka ee Federaalka in ka badan 6 bilood ka hor, laakiin weli jawaab kama helin. Maxaa samayn karaa?
Sharci ahaan, maxkamaddu waxay haysataa 6 bilood oo keliya inay go’aan kaga gaarto dacwadaada. Nasiib darose, badanaa waxay ku qaadataa wakhti dheer ficil ahaan. Waxaa jirta fursad aad kaga caban karto maxaa yeelay wakhti dheer ayey qaadataa, laakiin tani badanaa fikrad fiican maahan. Waxaa fiican inaad timaadid adeegga latalinta haddii aad u baahan tahay macluumaad dheeraad ah.
Waxaan go’aan diidmo ah ka helay Maxkamadda Maamulka ee Federaalka. Maxaa samayn karaa?
Hadda waxaad haysataa 6 toddobaad oo aad ugu gudbiso cabasho ama rafcaan maxkamadda maamulka ama dastuurka. Laakiin waxaad u baahan tahay garyaqaan. Waxaad ka heli kartaa liiska cinwaanada meelaha wanaagsan halkan. Haddii aadan awoodin tan, waxaan kaa caawin karnaa inaad dalbato kaalmo sharci ah. Taasi waxay ka dhigan tahay inaad gobolka ka heli karto gargaar sharci oo bilaash ah.
Fadlan la soco, si kastaba ha noqotee, inaad (sida caadiga ah) leedahay 14 maalmood oo aad iskaa uga tagto. Go’aanka maxkamaddu wuxuu khuseeyaa laga bilaabo maalinta laguugu adeego adiga (ama wakiilkaaga sharciga ah). Wixii hada ka dambeeya wax dambe oo difaac ah kama haysatid masaafurinta. Marka nasiib daro way dhici kartaa in lagugu hanjabo in lagu masaafuriyo intaadan dacwad gudbin. Sidaas darteed haddii aad hesho go’aanka noocaas ah, waa in aad tagtaa xarunta la-talinta sharciga sida ugu dhaqsaha badan.
Su’aalaha ku saabsan mideynta qoyska
Waxaan jeclaan lahaa inaan lamaanahayga keeno Austria. Taasi suurta gal ma tahay?
Ugu horreyntii, waxay kuxirantahay xaaladdaada ama nooca sharci ee aad ka haysato Austria. Mabda ‚ahaan, waxaad kaliya keeni kartaa hal lammaane oo aad horay isku qabteen. Nasiib darrose, lammaanayaasha ama kuwa isku doonan ee waan wali is guursan waxaa keeni kartaa haddii aad tahay muwaadin haysta dhalashada wadamada EU/EWR.
Ogolaansha noocee ah ayaan reerkeyga ku keeni karaa Austria?
Waad ku biiri kartaa qoyskaaga haddii aad leedahay mid ka mid ah ogolaanshayaasha soo socda, iyo kuwo kale. Tani waa kaliya liis tusaale ah. Haddii aad haysato sharci degenaansho oo ka duwan kan halkan ku qoran, fadlan nala soo xiriir si aad u joogtid dhinaca nabdoon:
Sharciga degenaashaha ardaynimada
Deganaanshaha joogtada ah ee Midowga Yurub
Miyaan sidoo kale qoyskayga ku soo kaxaysan karaa fiisaha,ilaalinta ku meel gaarka ah Laanqayrta Cas la’aanteed?
Maya, nasiib daro taasi ma shaqeyn doonto. Waa inaad horey ugu beddesho sharci degenaansho kale (tusaale ahaan deganaanshaha joogtada ah ee Midowga Yurub) kahor. Laakiin si aad u noqotid dhinaca saxda ah, nala soo xiriir haddii aadan hubin nooca fiisaha aad haysato!
Immisa jir ayay tahay in aan ahaado si aan ugu dacwoodo qoyskayga?
Fadlan ogow in adiga iyo lammaanahaagu labadiinuba aynaan ka yaraan 21 jir. Haddii aad ka yar tahay 21 sano waa inaad sugtaa mudo dheer.
Lammaanahaygu miyuu u baahan yahay caddayn aqoonta luqadda Jarmalka?
Asal ahaan haa. Lammaanahaagu wuxuu u baahan yahay caddeyn aqoonta luqadda Jarmalka ee heerka A1. Laakiin haddii aad magangalyo leedahay, lamaanahaagu ma aha inuu bixiyo caddeyn af Jarmal ah.
Waa maxay shuruudaha ay tahay inaan buuxiyo tan?
Shaqo: Waxaad ubaahantahay shaqo mushaar fiican qaadato. Waan in uu ahaadaa mushaarkaaga oo aan canshuurta laga jarin qiyaastii €1.300,-
Guri: Waxaad u baahan tahay guri kugu filan adiga iyo qoyskaagaba. Xaqiiqdi waa inaad heysataa heshiis kiro ah. Waxaa ugu fiican inaad la timaado qandaraaskaaga shaqadaada, kirada guriga, markaa waxaan xisaabin karnaa si sax ah in wax walboo hagaagsan yihiin ama laga yaabo inay wax jiraan.
Caymiska caafimaadka: Waxaad u baahan tahay caymis caafimaad. Haddii aad shaqo leedahay, had iyo jeer waxa ku jira caymiska caafimaadka.
Sidoo kale caruurteyda ma keeni karaa?
Haa, carruurta aan wali guursan waad keeni kartaa, laakiin waa in ay ka yaryihiin 18 sanno.
Miyaan xitaa keeni karaa waalidkay ama walaalahay?
Nasiib darro, waxaad taas sameyn kartaa oo keliya haddii aad tahay muwaadin u dhashay Austria ama waddan kale oo EU ah. Haddii aad magangelyo leedahay oo aad ka yar tahay 18 sanno markii aad timid Austria, fadlan la xiriir Laanqayrta Cas sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah!
Sidee nidaamku u shaqeeyaa?
Codsaduhu waa lamaanahaaga, adiga maahan. Isaga / iyadu waa inay aadaan safaaradda Austria ee wadankeeda asalka ah halkaasna ay ku soo gudbiyaan codsi. Haddii aysan safaarad Austria ku lahayn halkaas, kaliya na weydii safaaradda mas’uul.ka ka ah kiiskaaga. Damascus Dimishiq (Beirut) safaaradda ku taal waxay mas’uul ka tahay Suuriya, Soomaaliya waxaa masuul ka aha safaaradda Austria ee Nairobi, Afgaanistaan ​​waxaa qaabilsan mida ku taal Islamabad. Haddii lammaanahaagu ku nool yahay waddan kale, isaga / iyadu waxay aadi kartaa safaaradda halkaas ku taal. Haddii shaki ku jiro, kaliya na weydii.
Ballanta waa in lagu hayaa halkaas (waan ku faraxsanahay inaan ku caawinno). Ballantaan, dhammaan dukumiintiyada aad soo ururisay waa la wareejin doonaa, safaaradduna wax walba ayey u diri doontaa MA35 (Vienna) ama BH masuulka ka ah (bannaanka Vienna). Hay’adda ayaa markaa go’aamineysa in lammaanahaaga loo oggolaado inuu yimaado iyo in kale.
Codsiga sidoo kale ma laga xareyn karaa Austria?
Tan waxaa loo oggol yahay oo keliya kiisaska qaarkood. Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato halkan, fadlan noo soo qor emayl ama u imow la tashi furan.
Nidaamku ma lacag baa?
Codsiga laftiisu waa € 120 qofkiiba (€ 75 oo loogu talagalay carruurta aan qaan-gaarin). Kani waa khidmadda nadiifinta ah ee aan laguu soo celin doonin haddii dalabka la diido. Intaas waxaa sii dheer, waxaa jira kharashyo ku baxaya caddeynta, tarjumaadaha iyo safarka. Sidoo kale waa inaad adigu iska bixisaa tigidhka diyaaradda ugu dambeynta.
Dukumintiyadee baa lagama maarmaan ah?
Lammaanahaagu wuxuu u baahan yahay baasaboor, warqad dhalasho iyo warqada dambi la’aanta. Waxaad sidoo kale u baahan tahay shahaado guur. Mabda ‚ahaan, dukumiintiyada waa in lagu tarjumaa af Jarmal. Waxaad sidoo kale ubaahantahay xoogaa dukumiinti ah oo aad kahesho mideynta qoyska.Waxa ugu fiican inaad u timaado latashi waxaanan kuu soo diri doonaa liis la jaanqaadi doona xaaladaada.
Ma u baahanahay ballan si aan u imaado la-talin?
Badanaa uma baahnid ballan si aad ugu timaado wada tashi furan. Sababtoo ah COVID-19, waxaan hadda awoodnaa oo keliya inaan ku siino talo adoo ballan samaynaya. Kaliya noo soo dir fariin.
Ma haysto kaar deggenaansho oo sax ah xilligan. Weli ma u imaan karaa talo?
Dabcan. Qofna ku weydiin maayo aqoonsi,tani sidoo kale shuruud uma aha in aad talo naga hesho. Haddii lagaa dhigay sharci darro Austria, badiyaa wax badan oo aan qaban karno ma jiraan, laakiin waxaan ku siin karnaa talo ku saabsan aragtida.
Maxaan la imaanayaa latashiga?
Waxaan sida ugu fiican ku caawin karnaa markaan helno macluumaadka ugu dhameystiran ee suurtogalka ah ee ku saabsan xaaladdaada. Sidaa darteed, fadlan soo qaado dhammaan dukumiintiyada lagama maarmaanka ah ee ku saabsan nidaamkaaga. Haddii aadan taas rabin, qasab kuma aha, dabcan, laakiin markaa waxaan ku siin karnaa oo keliya macluumaad guud oo aanan si faahfaahsan ugu tagi karin xaaladdaada.
Sideen idinkula soo soo xiriiri karaa?
Waxaan hadda si fudud ku heli karnaa emayl ahaan (office@frida-beratung.org) iyo Facebook. Fadlan noo soo qor emayl si aad u hesho su’aalo faahfaahsan. Nasiib darro nalagama soo wici karno taleefan (weli) oo had iyo jeer ma joogno xarunta talo bixinta. Markaa fadlan ha noo imaanin xilli ka baxsan saacadaha la-tashiga, maxaa yeelay waxay noqon kartaa inaan cidina joogin.
Sidee isu maalgelisaan?
Waan ka mmadax banaanahay dawladda. Tani waxay awood noo siineysaa inaan u fidino adeegyo la-talin cid walba. Sidaa darteed ma helno wax maalgelin dowladeed, laakiin inta badan waxaa nalagu maalgeliyaa tabarucaad iyo maalgelin yar (aan dawli ahayn) iyo abaalmarinno, Maadaama taladu tahay mid ikhtiyaari ah, waa la maalgelin karaa.
Maxaan ugu qasbanahay inaan wax u saxeexo markaan idinla joogay idinka?
Waxaad saxiixday siyaasad gaar ah. Badanaa la taliyayaashu waxay sharxaan nuxurka bayaankaan, laakiin waxaan fahansanahay in badanaa 100% aan la fahmi karin. Waxaad cadeyneysaa inay caadi tahay annaga inaan keydinno xogta aad na siisay si aan talo uga helno. Kuwaas uma gudbinayno cidna waxaana ku qasban nahay inaan tirtirno haddii aad rabto mar uun. Waxaan u baahanahay xogtaada si aan u diiwaangelino wixii aan ka hadalnay intii aan ku guda jirnay wadatashiyada kala duwan iyo inaan kula soo xiriirno Fadlan ogow inaadan saxeexin awood qareen.
Waxqabadyadayada ku saabsan aaga xuquuqaha qalaad way kala duwan yihiin mararka qaarkoodna aad bay u adag yihiin. Waxaad noola imaan kartaa su’aalaha soo socda sida:
Waxaan joogay Austria waqti aad u dheer. Goorma ayaan dalban karaa jinsiyadda?
Waxaan jeclaan lahaa inaan dalbado deganaansho rasmi ah ee EU. Xitaa ma ku sameyn karaa taas xaaladdayda? Muddo intee le’eg ayaan ku joogi karaa Austria tan?
Lamaanahaygu waa Austrian. Tani sidoo kale ma i siinaysaa joogitaan?
Lammaanahaygu waa muwaadin EU ah. Tani sidoo kale ma i siinaysaa joogitaan?
Waxaan jeclaan lahaa in aan ku imaado Austria “fiisada shaqada”. Sidee u shaqaysaa?
Waxaan jeclaan lahaa inaan wax ku barto ama aan aado iskuul ku yaal Austria. Sideen iyo xaggee u codsadaa ogolaanshaha joogitaanka saxda ah („Visa“)?
Waxaan ku dhamaystay waxbarashadaydii Austria oo hadda waxaan raadinayaa shaqo. Maxay yihiin shuruudaha “fiisada shaqada” (kaarka cas-cad-casaanka)?
Waxaan rabaa inaan qof ku casuumo Austria. Sideen ugu codsadaa fiiso?
Waxaan ka helay warqad MA35 mana garanayo habka aan ku socdo. Maxaan ka qaban karaa?
MA35 waxay qaadatay waqti dheer inay ku shaqeyso codsigeyga. Wax ma qaban karaa?
Ma garanayo dukumiintiyada ay tahay inaan horkeeno hay’adda / safaaradda. Ma jiraa liis dukumiinti oo ku saabsan codsigeyga?
Halkeen ka heli karaa foomka dalabka saxda ah?
Waa imisa qiimaha arjiga ee aan rabo inaan soo gudbiyo?